Xujeyda oo qarka u saaran inay ka baaqdaan Xajka [Akhri Sababta]
Maxamed Cumar Dalxa, oo kamid ah Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Maxamed Cumar [Dalxa] oo kamid ah Xubnaha Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay caqabadaha ka taagan arrimaha xajka.
Dalxa ayaa sheegay in Xujeyda Soomaaliyeed ay sanadkan qarka u saaran yihiin inay ka baaqdaan gudashada acmaasha Xajka, ee loo aadayo dalka boqortooyada Sacuudiga.
Xilldhibaanka oo u waramay warbaahinta Maxaliga ah ee Muqdisho ayaa daboolka ka qaaday inay sababta ugu wayn ay tahay khilaaf ka taagan qiimaha iyo shuruucda shirkadaha diyaaradaha ee Xujeyda u qaada Sacuudiga.
"Hadii uu sii jiro khilaafka, waxaa dhalan kara 2 arrimood oo kala ah in Xujeyda Soomaalida ay sanadkan ka baaqdaan Xajka iyo in Sacuudiga mamnuuco diyaaradaha Xujeyda ka keenaya Soomaalida," ayuu yiri Dalxa.
Hadalka Dalxa ayaa imaanaya iyadoo dhawaan ay shuruuc kala duwan ay Wasaaradaha arrimaja awqaafta diinta dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada usoo dejiyeen arrimaha xajka iyo qiimaha lagau raaco diyaaradaha.
Dadweynaha ayaa mudooyinkii dambe laga dareemayay Guux ku aadan shirkadaha diyaaraha ee qaadeya Xujeyda, kadib markii cawasha laga muujiyay lacagta laga qaado dadka, oo ah mid aad u badan.
Xajka ayaa ah xilliga kaliya ay faa'idada ugu badan helaan Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee diyaaradaha, kuwaasi oo 25-kii sano ee dalka uu burburka ku jiray aanay jirin dowladda ama nidaam lagu maamula.
Xajka ayaa kamid ah Tiirarka ugu waa weyn ee Islaamka, iyadoo uu EBBE ku waajib yeelay qofka Muslimka ah, gaara ahaan inta uu ALLE awood u siiyay inay tagaan Makka, oo soo xajiyaan.
Khilaafkii arrimaha Xajka oo la xaliyay [Maxaa lagu heshiiyay?]
Soomaliya 24.07.2018. 22:51
Wasiir katirsanaa Xukuumadda Khayre ayaa xilkiisii ku waayay inuu ku lug yeeshay khilaafkan...
Xaalada Muqdisho oo Maanta ka duwan sidii hore [Maxaa soo kordhay]
Soomaliya 04.04.2018. 08:16
Diblomaasiyiinta Qunsuliyadda Somalia ee Jeddah oo Muqdisho looga yaarey
Soomaliya 06.02.2019. 23:03
Safiirka Sacuudiga oo kulamo siyaasadeed kawada Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 08.12.2018. 23:52
Fariin uu soo diray Boqor Salman oo lasoo gaarsiiyay Farmaajo [DAAWO]
Soomaliya 20.04.2019. 10:31
Farmaajo oo u ambabaxay Sacuudiga [Akhri Ujeedka Safarkiisa]
Soomaliya 14.04.2018. 10:55